SAWIR: Kolonyo Ciidamo Mareykan Ah Oo Lagu Weeraray Koonfurta Wadanka Afghanistan.
Wednesday August 02, 2017 - 21:59:18 in Wararka by Super Admin
Wadanka Afghanistan weerar dhiig badan ku daatay ayaa lagasoo sheegayaa magaalo kutaal Koonfurta wadankaasi oo Taliban ay awood melleteri iyo mid siyaasadeed ku leedahay.
Wararka ka imaanaya gobolka Qandahaar ayaa sheegaya in weerar naf-hurnimo lagu beegsaday Kolonyo katirsan ciidamada Mareykanka ee qeybta ka ah isbahaysiga NATO ee duullaanka gardarrada ah ku qaaday Afghanistan.
Kolonyada oo ahaa ciidamo American ah ayaa lala helay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan istish-haadi ah kaasi oo gaarigiisa ku dhuftay gaadiid ay la socdeen askar iyo Saraakiil Mareykan ah.
Sheekh Qaari Yuusuf Axmedi oo Ah Afhayeenka Taliban ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in weerar guuleystay ay la heleen kolonyo katirsan NATO, Taliban waxay xaqiijisay in weerarka istish-haadiga ah ay ku dishay 15 Askari Mareykan ah islamarkaana ay ku burburisay 2 taagni.
Weerarka ayaa ka dhacay meel ku dhow xarunta ciidanka Falcelinta degdegga Dowladda Afghanistan ee magaalada Qandahaar waxaana la rumeysanyahay in halaag daran uu gaarsiiyay ciidanka la weeraray.
Dhinaca kale War rasmi ah oo kasoo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu xaqiijiyay in weerar xooggan ay la kulmeen ciidamadooa ka howlgala Koonfurta Afghanistan islamarkaana khasaara uu jiro balse ay dib kasoo sheegi doonaan.
"Weerar Argagaxiso ayay lagu qaaday kolonyo katirsan ciidamadeena ku sugan wadanka Afghanistan balse khasaaraha ka dhashay weerarkan dib ayaan kasoo sheegi doonaa” ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay isbahaysiga NATO.